एउटै रुखको कमाई प्रतिवर्ष ३६ लाख-NepalKanoon.com
एउटै रुखको कमाई प्रतिवर्ष ३६ लाख
श्रावण २८, काठमाण्डौ । एउटा रुखबाट वर्षभरिको कमाई कतिसम्म होला रु हजार, दहजार या लाख ? सायद कसैले अनुमान गर्ला ? मझुवाका धनबहादुर लामाको एउटै रुखको कमाई ३६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो बोधित्तिको रुख हो, जसले दुई वर्षको दुई छिमल फल बेच्दा उनलाई यत्रोविधी आम्दानी भइरहेको छ । पैसाको झोला बोकेर क्रेता रुखको फेदमै आइपुग्छन् ।
पहिले उनले उक्त रुखमा फल्ने दानाबाट उपार्जन होला भन्ने कल्पनासमेत गरेका थिएन । गेडा फथ्ल्यो, झथ्र्यो । रहदाँ बस्दा तिनै दाना उनेर माला लगाउनुपर्छ भन्ने उनले बुझे कतित अरुलाई बाँडे । तीनवर्षअघि नै उनले बोधिचित्तको फल बेचेर साढे १२ लाख रुपैयाँ कमाए झन त्यो खवर संचारमाध्यममा आयो । जसबाट चर्चा भएर कमाई साढे २२ लाख पुग्यो । अनि यो वर्ष २८ लाख कमाई भइसक्यो, दोस्रो सिजनको फलका लाथि ८ लाख थमाउने आइसके ।